I-China GREATPOOLl's Pool & SPA Product embonini nabakhiqizi beRamada Group's Sanya Hotel | Iphuli Enhle
I-GREATPOOLl's Pool & SPA Product eSanya Hotel yeRamada Group
I-GREATPOOL ihlinzeka ngedizayini nazo zonke izinto zokusebenza nezinto zokwakha zechibi lokubhukuda nama-SPA ashisayo entwasahlobo yehhotela elisanda kwakhiwa le-Ramada Group e-Sanya City, eSifundazweni sase-Hainan, e-China.
Ngokusekelwe ezidingweni zephrojekthi nokuxhumana neklayenti, umnyango wezobuchwepheshe we-GREATPOOL wenze idizayini yephrojekthi ngohlu lwemikhiqizo, oluqashelwa kakhulu iklayenti. Zonke izinto ezisetshenziswayo nezinto zokwakha, kufaka phakathi amaphampu, izihlungi, ukukhanya kwe-IP68 LED engaphansi kwamanzi, iphampu yokushisa yomthombo womoya, i-transformer, isishintshi sokushisa, ikhabhinethi yokulawula neminye imikhiqizo, ihlinzekwa yi-GREATPOOL, enekhwalithi ethembekile, efeza izidingo zephrojekthi.
Kule phrojekthi, amasethi angu-9 amaphampu okushisa omthombo womoya asebenza kahle kakhulu e-GREATPOOL azohlinzeka ngamanzi afudumele echibini lokubhukuda kanye ne-hot spring SPA, esebenzisa amandla aphansi, evumelana nemvelo. Futhi amaphampu okushisa afakwe uhlelo lokulawula oluthembekile noluhlakaniphile, i-logic-friendly logic, kulula ukuyisebenzisa noma ukuyigcina, futhi inokuvikela okuhlukahlukene okuhlelekile, iqinisekisa ukusebenza okungenakukhathazeka nokusebenza.
Amaphampu okushisa amasethi angu-9 ahlanganisa amasethi ama-4 amaphampu okushisa anamandla okufudumeza angu-19KW (amandla okufaka alinganiselwe angu-4.5KW), amaphampu okushisa ama-4 asetha anamandla okufudumeza angu-26KW (amandla okufaka alinganiselwe angu-6.4KW) kanye nesethi yephampu yokushisa engu-1 enamandla okufudumeza 104KW (amandla okufaka alinganiselwe angu-26KW), konke sekuvele kufakiwe.
I-GREATPOOL, ihlale iphatha ikhwalithi yomkhiqizo njengento ebaluleke kakhulu kuqala, futhi yenze uchungechunge lomkhiqizo wepompo lokushisa lonke olugunyazwe yi-CE, CB&ROHS njll., ukukhiqiza nokulawulwa kwekhwalithi kwenziwa ngokuya nge-ISO9001 & ISO14001 ejwayelekile. Ukuthembeka nokuzinza kuwuphawu lwemikhiqizo yethu, nokuzibophezela kwethu kuwo wonke amakhasimende.
I-GREAPOOL, njengomhlinzeki oyedwa wedamu lokubhukuda ochwepheshe & nemishini ye-SPA, isilungele ukukunikeza umkhiqizo wethu nesevisi.
Isikhathi sokuthumela: Jan-05-2022
Iphrojekthi Yephuli Yokubhukuda, Isevisi ye-Swimming Pool, I-Infinity Edge Swimming Pool, Inkampani ye-Swimming Pool, Isixazululo sePublic Swimming Pool, Isixazululo se-Outdoor Swimming Pool,